Sorona Masina ny 26/02/2017 - Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 26/02/2017
ALAHADY FAHA-8 mandavantaona — A
RAY AMAN-DRENY TSY MAHAFOY ZANAKA ANDRIAMANITRA
Sal. 17, 19-20
Nitsangana ho mpiaro ahy ny Tompo; nalany amin’ny mahaory aho, nafahany satria tiany!
Mihanta aminao izahay, ry Tompo, enga anie izao tontolo izao handry feizay sy hizotra araka ny lahatrao ary ny Eglizinao ho faly sy hiadana hanompo Anao.
Iz. 49, 14-15
Izaho tsy mba manadino anao.
Hoy i Siôna: “Nafoin’ny Tompo aho; hadinon’ny Tompo aho!” Hanadino ny taizany va ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin’ny naloaky ny kibony? Na hanadino aza ny reny, Izaho tsy mba hanadino anao!
Sal. 61, 2-3, 6-7, 8-9ab
Fiv.: Ao amin’Andriamanitra mianina, ry fanahiko.
Eo amin’Andriamanitra ny fanahiko no mianina; avy aminy manko ny famonjena ahy: izy no Vatolampiko, famonjena ahy, fiarovana avo ho ahy: tsy hihontsona aho.
Eo amin’Andriamanitra mianina, ry aiko, fa Izy irery ihany no tokiko, Izy no Vatolampiko, famonjena ahy, fiarovana avo ho ahy: tsy hihontsona aho!
Andriamanitra tokana ihany no famonjena ahy sy voninahitro;
Izy irery ihany no tokiko sy Vatolampiko mahery.
1 Kôr. 1, 1-5
Ny Tompo no hampiharihary ny hevitry ny fo.
Ry kristianina havana, aoka hataon’ny olona ho mpandraharahan’i Kristy izahay, sy mpitandrina ny misterin’Andriamanitra. Ary raha mpitandrim-pananana, dia ny ho samy mahatoky no ilaina indrindra. Raha ny amiko, dia tsy mampaninona ahy na hotsarainareo aho, na hotsarain’ny andron’ny olona; fa na izaho aza tsy mitsara tena. Satria tsy hitako izay tsiniko, nefa tsy mahamarina ahy izany, fa ny Tompo no mpitsara ahy. Noho izany, aza mitsara alohan’ny fotoana, dia mandra-pahatongan’ny Tompo; fa Izy no hampiharihary ny zavatra takona ao amin’ny maizina, ka hampiseho ny hevitry ny fo, ary amin’izay vao samy hahazo izay dera tandrify azy tsirairay avy.
Azo manahy izay hohaninareo ny ampitso.
Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’ny mpianany nanao hoe: “Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho halany, ary ny anankiray ho tiany; na ny anankiray hombany, ary ny anankiray hoesoiny. Koa tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny vola ianareo. Noho izany, izao no ataoko aminareo: Aza manahy foana ny amin’ny ainareo, dia izay hohaninareo na hosotroinareo, na amin’ny tenanareo, dia izay hotafianareo. Moa tsy ny aina no ambony noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana? Jereo ny voro-manidina, fa tsy mba mamafy na mijinja, na manangona an-tsompitra ireny, fa ny Rainareo izay any an-danitra no mamelona azy; ka moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza aminareo, na dia manahy aza, no mahay manalava ny tenany na dia iray hakiho ihany aza? Ary ahoana no anahianareo ny amin’ny fitafiana? Zahao ny fanirin’ny lisy any an-tsaha, fa tsy mba miasa, na mamoly ireny; kanefa lazaiko aminareo, fa na dia i Salômôna tao amin’ny voninahiny rehetra aza dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin’izy ireny. Ka raha toy izany no fanafin’Andriamanitra ny ahitra any an-tsaha, izay eny anio nefa hatsipy any am-patana rahampitso, tsy mihoatra noho izany va no hataony aminareo, ry kely finoana?
Noho izany, aza manahy ianareo manao hoe: Inona no hohaninay, na inona no hosotroinay, na inona no hotafinay? Fa ny Jentily no mikatsaka izany rehetra izany; ary fantatry ny Rainareo izay any an-danitra fa ilainareo izany. Koa katsaho àry aloha ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia homena izany rehetra izany ianareo ho fanampiny. Ary aza manahy ny ho ampitso ianareo, fa ny ampitso hanahy ny azy, ary ny anio efa ampy ny fahoriana midona aminy”.
Ry kristianina havana, miahy sy mitsimbina antsika zanany Andriamanitra; koa apetraho aminy ny fitokiantsika, ary ambarao amim-pinoana sy fitiavana izay rehetra ilaintsika sy izao tontolo izao.
Valy: Tompo ô, henoy izahay miantso Anao, mba ekeo ny vavakay mitalaho.
* Mivavaha ho an’ireo mpitondra ao amin’ny Eglizy, mba hahaizany miahy sy mitsimbina marina ny vahoaka napetrak’Andriamanitra hiadidiany, ka hahitan’ny olona fa Ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka tokoa Andriamanitra.
* Mivavaha ho an’ny mpitondra ara-nofo, sy ny manam-pahefana rehetra, mba hoentiny manasoa ny olona rehetra sy ny olona manontolo ny famokaran-karena iezahana isam-pirenena, ary mba hahay mifampizara ny manta sy ny masaka izao tontolo izao araka ny fandaharan’Andriamanitra mpiahy ny zava-boaary.
* Mivavaha ho an’ireo rehetra mihevi-tena ho hadinon’Andriamanitra, tsy mana-mpiahy na tsy misy mpijery, tsy manan-kohanina na trano hialofana, ny voan’ny fahasahiranana isan-karazany: mba hisy olona hanaiky hoentin’Andriamanitra hanampy azy ireny, ary izy kosa mba hiraiki-po amin’Andriamanitra lalandava.
* Mivavaha ho antsika tafangona eto mba samy hijoro ho vavolombelon’ny fitiavan’Andriamanitra any amin’izay rehetra alehantsika: hiezaka sy hifanampy hampanjaka ny fahamarinan’Andriamanitra ao anatin’ny fifankatiavana, ka sady hampandroso ny Fanjakany, no hameno soa ny olona rehetra.
Tompo ô, fatra-piahy sy mpitsimbina anay olombelona Ianao, koa henoy izao vavaka asandratray any aminao izao. Herezo izahay hatoky Anao hatrany eo amin’ny fiainanay, ary arovy amin’ny fakàm-panahy mila hampiala anay amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy Zanakao, ilay Andriamanitra velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Amen.
Andriamanitra ô, tolotra avy aminao no nasainao enti-manaja ny Anaranao, ka mitalaho aminao mora fo izahay: enga anie ny Sakramenta nataonao hahitanay sitraka eo anatrehanao mba hahazoanay ny valisoa mandrakizay.
Prefasy: Alahady faha-IV, ohatra.
Miantsa ny Tompo aho noho ny soa nataony tamiko, ary mankalaza ny Anaran’ny Tompo Avo indrindra.
Feno ny fanomezanao mahavonjy izahay, ry Tompo, no mitalaho aminao be indrafo; enga anie ny Sakramenta amelomanao anay ankehitriny, hahamendrika anay handray anjara amin’ny fiainana mandrakizay.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0899 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org